Amasethi ezembatho zokuvikela → Izingubo zokusebenza • Imifekethiso yekhompyutha ye-P & M
Izingubo zokuvikela zenzelwe ukuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi somsebenzi. Futhi ziyimfuneko yemithetho yezempilo nokuphepha. Ukusetshenziswa kwezinto zokwakha ukwenza iqoqo elinjalo kudinga izindwangu ezikhethekile ngenxa yezimo zazo ezithile zokusetshenziswa.
Ungathenga esitolo sethu, njengengxenye yezingubo zokuzivikela imaski yokuvikela, izigqoko zokugqoka, izembatho ezingenayo i-asidi (kubantu abasebenza ngamakhemikhali aqinile) nezingubo zabagawuli bezinkuni (amabhulukwe namaski)
Ngenxa yokusetshenziswa kwezinto ezisezingeni eliphakeme, izingubo zokuzivikela ziyamelana nomonakalo, imiphumela emibi yezici ezihlobene nomsebenzi owenziwayo, futhi iphikisana kakhulu nokuhlanzwa noma ukuwashwa kaningi. Izakhi zokuzivikela zenziwa ngezinto ezihloselwe ukusetshenziswa kwazo okuhlosiwe, konke ukuqinisekisa ukuphepha komsebenzisi. Ithuba elibanzi lokulungisa izingubo liqinisekisa ukuthi lizolungela izinhlobo eziningi zezibalo nabantu abaphakeme ngokuhlukile.
Izingubo zokuvikela ukuvikelwa nokunethezeka komsebenzi
Izingubo ezenziwe ngendwangu ye-PVC (evikela i-asidi) ziyamelana namakhemikhali. Yenzelwe ukusetshenziswa ezindaweni lapho kunengozi yokuxhumana nezinto ezifana ne-acid, izisekelo nama-hydroxide. Izembatho zokuvikela ezinikezwe esitolo sethu zihlangabezana nezidingo ze-EN13688, EN14605. Izingubo zokuzivikela zifaka nezimpahla ze-chainsaw ukuvikela ekulimaleni kwe-chainsaw (ibhulukwe). Ingubo equkethe ijakhethi nebhulukwe inemininingwane eminingi yokugcina amazinga okuphepha aphakeme kakhulu. Isethi inconyelwa abagawuli bezinkuni noma ama-chainsaw opharetha - ihlangabezana nezidingo ze-EN13688 ne-EN381-5 (isigaba 2 (ibhulukwe)).
Ukuhlanganiswa kwethu kufaka phakathi izingubo zesimanje zokuzivikela ezenziwe ngokotini osindayo onenhlanganisela yezinto zokwenziwa. Ukucaciswa komsebenzi emisebenzini eminingi kanye nemibandela yokusebenza kwabo kusho ukuthi amamodeli esiwanikezayo abhekelela lezi zidingo, alungisa imingcele kwizidingo zomuntu ngamunye zemisebenzi ekhethiwe.
Izingubo zokuvikela ezinguchwepheshe zenziwe ngezinto eziningi ezisebenzisa ukusetshenziswa kwazo. Ukunethezeka, bahlonyiswe ngamaphakethe avulekile, iziphu zokusiza ukugqoka amabhulukwe, nezinsimbi eziqinisiwe ukuvikela ezintweni zemishini, zamakhemikhali nezomkhathi.
Ngaphambi kokuthenga kusuka ku- isitolo sincoma ukuxhumana nathi ukuqinisekisa ukutholakala kwemikhiqizo nomkhiqizi wethu. Abasebenzi bethu banakho ukuthola izeluleko mayelana nokukhethwa kwezingubo.
izingubo zokuzivikela ze-betaamafilimu wokuvikela izinguboizingubo ezilahlwayo ezilahlwayoizingubo zokuvikela ezokwelaphaizembozo zokuvikela izinguboizingubo zokuvikelaizingubo zokuzivikelaizingubo zokuvikela izinganeizingubo zokuvikela abasebenza ngogesiizingubo zokuvikela odokotelaizingubo zokuvikela ama-weldersizingubo zokuvikela odokotela bezilwanebarn izingubo zokuzivikelaizingubo zokuvikela ukufafazaizingubo zokuvikela i-husqvarnaizingubo ezilahlwayo ezilahlwayoizingubo zokuzivikela ezivela ku-kielceizingubo zokuvikela ezokwelaphaizingubo zokuvikela ingxibongoIzingubo zokuvikela i-PPEizingubo zokuvikela umshiseliqapha izingubo zokuzivikelaizingubo zokuvikela izicishamliloisethulo somnyango wezimpahla zomliloizingubo zomsebenzi zokuvikelaizikhwama zokuvikela izingubo